Adi-hevitra Malok'ila Politika
2011-11-04 @ 11:47 in Politika
Mankasitraka anareo namaky ny lahatsoratra nitondra ny lohateny hoe Malok'ila Tohiny sy Hitohy iny. NY faniriako moa dia ny hametraka adi-hevitra ka tsy mampaninona mihitsy ny tsikera milaza fa tombatombana ny raharaha. Arakaraka ny toerana misy ny tsirairay koa moa no fomba fijery iny raharaha iny. Na izany aza dia mbola nitohy ny adi-hevitra.
Gazety iray moa namoaka hoe nahoana no tsy ho lany mihitsy i Botozaza, toa nalaza ho notenenin'ny Ambasadaoro Frantsay tamin'ny 28 oktobra ihany koa moa izany ka nampisy raharaha hafa, dia nolazaina fa Botozaza, amin'ny maha-minisitry ny fitaterana azy fony Ravalomanana filoha, no nametraka ny Silo an'ny Tiko tao Toamasina sy nandroaka ny vondrona Seabord amerikana, teo ihany koa ilay fividianana voromby filoham-pirenena. NOho ireo rehetra ireo dia nametraka ny VETO ny Departemanta Amerikana. Lasa ny saiko hoe: koa raha izany dia ny Amerikana mihitsy (ankoatra ilay tenin'ny Ambasadaoro Frantsay) no mitsipaka izay mety ho avy amin-dRavalomanana. Amiko Ravalomanana no tompon'andraikitra voalohany amin'ireo rehetra ireo fa mpanatanteraka fotsiny tamin'ny maha-minisitra azy i Botozaza Pierrot. Izany hoe raha raisina ny lazain'ity gazety Courrier de Madagascar ity dia tsy hahatafiditra praiminisitra mihitsy ny ankolafy Ravalomanana satria samy hitsipaka izany hatrany ny Frantsay sy ny Amerikana, noheverina ho miady tombontsoa eto Madagasikara.
Hevitra faharoa nivoaka ihany koa nataona mpanadihady iray, mpanao gazety fahiny tao amin'ny RNM aza ny tenany. Namariparitra ny fijeriny tamin'ny fanantanterahana ny sori-dalana voatsikera teo amin'ny fanendrena praiminisitra. Namahavaha ny tenany fa araka ny voalaza ao amin'ny andininy fahadimy ny praiminisitra dia tsy avy amin'ny ankolafy sady tsy iray fiaviana (faritany) amin-dRajoelina. Ny niavian'ny fanendrena, hoy izy, na dia eo aza ny maha-leader azy dia izy natolotr'i Zafy sady tsy iray fiaviana amin-dRajoelina no tsy avy amin'ny ankolafin-dRaoelina. Raha itarina kely ny fanazavany dia mbola tafavoaka tsy azo fidiana indray izay avy amin-dRavalomanana satria iray fiaviana (faritany) Rajoelina sy Ravalomanana. Ny hevitro aloha dia diso izany fomba fijery izany satria toy ny manamarika hatrany fa tena natao mihitsy izay nanalana ny ankolafy Ravalomanana tamin'ilay tondrozotra. Fa raha izany no marina dia henjana ilay teti-panorona nahavitana iny sori-dalana farany teo iny. Efa rere moa ankehitriny fa tsy hiditra anatin'ny rafitra ny movansa Ravalomanana.
Mbola raikitra hatrany ny resaka amin'ny hoe nahoana ny Beriziky? Ny nahavariana sy nisongadina teo imasoko voalohany dia izy framasao, vondron'olona manana ny heriny na aiza na aiza manerantany, raha mbola marina hatrany ny filazan'ilay gazety namoaka azy. Fa ny tena manitikitika ny maro hatreto dia ny nifidianan'i Zafy Albert azy hatolotra na dia niaiky aza Atoa Beriziky tenany fa tsy avy amin'io ankolafy io mihitsy izy. Dia hoy aho taitra tampoka hoe: toa avy any Avaratra moa izy iny? Ary Zafy Albert koa moa tsy avy any avaratra? Milaza ho tsy mahazo moa ny olona hoe nahoana no olona efa niara-dia tamin'i Andry Rajoelina tamin'ny 2009 no natolony dia hoy aho hoe mety ho safidim-paritra an! zony izany ary safidiny.
Jentilisa 4 novambra 2011, amin'ny 13:48 (oay, anniversaire-n-dRatsiraka moa izany? hum hum)
vakio koa ny resaka solika